रिपोर्टर: प्रदीप भट्टराई बाट सम्पूर्ण खबर
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नो 'सत्ता' जोगाउन पछिल्लोपटक दुई महिलालाई 'त्रुपको पत्ती'का रूपमा प्रयोग गरिरहेको समाचार बाहिरिएको छ। पहिलो त्रुपको पत्ती हुन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, दोस्रो त्रुपको पत्ती नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्छी। अहिले यी त्रुपका पत्ती शीतल नि
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली फण्डाप्रिय नेता हुन् । उनी एकपछि अर्को फण्डा निकाल्छन् र आफूलाई नै थप अप्ठ्यारोमा पार्छन्। आफूलाई फाइदाका लागि चलाइने फण्डाले उनी अरूलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्छन्। पछिल्लोपटक भारतले आफूलाई हटाउन लागेको भनेर चलाएको फण्डाले उनी, उनको गुट, पार्टी, सरकार र नेपालको शासन व्यवस्थालाई नै अप्
अमेरिका आफ्नो स्वतन्त्रता दिवश जुलाई फोर्थको पूर्वसन्ध्यामा छ। सन् १७७६ को यही दिन स्वतन्त्र भएको अमेरिका त्यसयता हरेक वर्ष जमेर उत्सव मनाउँदै आएको छ। तर, यसपटक अमेरिकामा कुनै उत्साह छैन। न जमेर मनाउनुपर्ने माहौल छ न कारण। कोरोना कहरबाट बच्नका लागि जमघट निरूत्साहित छ, मास्क लगाएर जानुपर्छ। सामाजिक दूरी
अन्तत: नेकपा भन्ने पार्टी फुट्ने नै भयो। कथकदाचित नफुटे पनि अब यो पार्टी जुट्ने छैन। कतै जुटिहाल्यो भने पनि त्यो लोभीपापीका लागि सत्ताको अंकगणित होला तर त्यसले अब नेपाली जनताको मन जित्ने छैन। स्थायी सरकार र देशको समृद्धिका लागि जनताले दिएको प्रचण्ड बहुमतको अपमान गर्ने यो पार्टीले ढिलो चाँडो सजाय पाउँने नै छ।
मदन भण्डारी नेपाली राजनीतिका विद्यार्थीका लागि कुनै नौलो नाम होइन। यद्यपि, यो नाम आज उनकै पार्टी र नेताका चरित्रका कारण क्रमश: सम्झन लायक हुन छोडेको छ। नयाँ पुस्ताका लागि त यो नाम अपरिचित नै छ भने पनि हुन्छ। मैले पनि मदन भण्डारीसँग पातलो उठबस गर्ने मौका पाएको छु। उनको अन्तर्वार्ता लिएको छु, उनका कयोैं
किन सम्झने मदन भण्डारीलाई ?
माधव नेपालका घाँटीमा अझै झुण्डिएकैछ 'कोरोना जन्तर'.. लज्जाशरणम् !
नेपालमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति बैठक जारी छ। पार्टी विधानमा हरेक तीन महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको म्यान्डेटरी बैठक २० स्थायी समिति सदस्यले माग गरेपछि लामो समयपछि बसेको हो। पार्टी अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको ईच्छाविपरित डाकिएको बैठक जे जस्ता विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने हो, ती
होला त वासिङ्टन डीसी अमेरिकाको ५१औं राज्य ?
अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसीलाई ५१औं राज्य बनाएर नयाँ नाम स्टेट अफ वासिङ्टन, डगलस कमनवेल्थ दिने प्रस्ताव अमेरिकी कंग्रेसको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले पारित गरेको छ। शुक्रबार अमेरिकी कंग्रेसको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले यो प्रस्ताव पारित गरेको हो । डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत रहेक
डोनल्ड ट्रम्पलाई अर्को झड्का, भतिजीको पुस्तक रोक्ने मुद्दा अदालतद्वारा खारेज
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई अर्को एक गम्भीर झड्का लागेको छ।आफ्नै भतिजी मेरी ट्रम्पको प्रकाशोन्मुख पुस्तक 'टु मच एण्ड नेभर इनफ' प्रकाशनमा प्रतिवन्ध लगाउने उनको प्रयास अदालतले खारेज गरिदिएपछि उनको समस्या अरू बढेको हो। न्युयोर्कको क्विन्स काउन्टी सेरोगेट अदालतका न्यायाधीश पिटर जे. केलीले व